जापानमा जाडो पहिरन! तपाईंले के लगाउनु पर्छ? - Best of Japan
जाडो मौसममा जापान यात्रा गर्दा तपाईले कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ? यदि तपाइँ आफ्नो देशमा चिसो जाडोको अनुभव गर्नुहुन्न भने, तपाइँले के लगाउनु पर्छ होला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जाडो मा जापान मा यात्रा को लागी लुगा को बारे मा केहि सहयोगी जानकारी को लागी परिचय गराउनेछु। मैले तल जाडोका लुगाहरूको तस्वीर पनि बनाए।
यदि तपाईं होक्काइडो जाँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
तपाईं जाडोमा कोट वा जम्पर राम्रोसँग लगाउनुहुन्छ
जापानी जाडोमा लगाउने लुगाका उदाहरणहरू
होक्काइडो विशेष गरी चिसो छ, त्यसैले सावधान!
सामान्यतया, होन्शु, क्युशु र शिकोकूमा बसोबास गर्ने जापानीहरूले कोट लगाएका छन् वा यम्परबाट आएका छन्
डिसेम्बर ढिलो फेब्रुअरी सम्म। यस बीच, जब हामी न्यानो भवनमा हुन्छौं, हामीले हाम्रो कोट निकाल्यौं र ज्याकेट लगाउँदछौं जस्तो कि शर्टमा स्वेटर।
होक्काइडोमा बस्ने जापानीहरूले नोभेम्बरसम्म कोट वा जम्पर लगाउने छन्। डिसेम्बरमा तिनीहरूले होन्शुका जापानी मानिसहरू भन्दा थोरै मोटा कोट लगाएका छन्। जब यो चिसो हुन्छ, जस्तै साँझमा, तिनीहरू ऊन टोपी लगाउँदछन् वा तातो राख्नको लागि ग्लोभहरू लगाउँछन्।
अर्कोतर्फ, ओकिनावामा, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले जाडोमा पनि कोट लगाउँदैनन्। प्रत्येक ग्रीष्म ,तुमा, जापानीज द्वीपसमूह जुनसुकै ठाउँमा पनि तापक्रममा मिल्दोजुल्दो छ (सबै ठाउँमा तातो!), तर जाडोमा तापक्रम स्थानमा निर्भर गर्दै फरक फरक हुन्छ।
जाडोमा, म सिफारिस गर्दछु कि तपाई जानुहुने ठाउँको हिसाबले नै सबै भन्दा राम्रो कपडा तयार गर्नुहोस्।
जापानमा हिउँदका तस्वीरहरू तल छन्। यी सम्भवतः होन्शु, क्युशु र शिकोकूमा लिइएको फोटोहरू हुन सक्छ। कृपया यी फोटाहरूमा हेर्नुहोस् र जापानमा यात्रा गर्दा लगाउने लुगाको बारेमा सोच्नुहोस्।
यदि तपाईं होक्काइडो वा होन्शुको अग्ला ठाउँहरूमा जानुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि तपाईंले यी चित्रहरूमा देखाइएको कपडा भन्दा थोरै मोटो कपडा लगाउनु पर्छ।
यदि तपाईं क concrete्क्रीट भवनको सट्टा काठको जापानी शैलीको भवनमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले लगाएको लुगा अलि बढी मोटा हुनुपर्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं क्योटोमा परम्परागत निजी घर मा रहनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि स्वेटर जस्ता तातो कपडा घर भित्र अपरिहार्य छ।
होक्काइडोमा, बाहिरका घरहरू धेरै चिसो हुन्छन्, तर भवनहरूका भित्री भागहरू प्राय: तातो हुन्छन्। होक्काइडोमा बस्ने मानिसहरूलाई हिउँदका लागि पर्याप्त कोठा बनाउने बानी हुन्छ। तिनीहरू बाहिर आफ्नो घर जाँदा चाँडो चिसो नहुँदा उनीहरूले आफ्नो शरीर सँधै न्यानो राख्छन्।
यदि तपाईं ओकिनावामा बस्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, मलाई लाग्दछ कि यो तस्बिरहरू भन्दा पातलो कपडाको साथ ठीक छ
अवश्य पनि, त्यहाँ व्यक्तिगत भिन्नताहरु हुनेछन्। यदि तपाईं चिसो राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं आफ्ना साथीहरू भन्दा बढि कपडा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्दछु कि तपाईसँग जापानमा ठूलो यात्रा छ!
यदि तपाइँ जाडोमा होक्काइडोको यात्रा गर्नुहुन्छ भने होशियार हुनुहोस् किनकि यो टोकियो वा क्योटो भन्दा धेरै चिसो छ। जाडोमा होक्काइडोमा लगाउनु पर्ने कपडाको सम्बन्धमा, मैले निम्न फोटोग्राफहरू सहित निम्न लेखहरू थपें। यदि तपाईं अधिक जानकारी चाहनुहुन्छ भने, कृपया यसलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।